download | ZAYYA
လက်ကလေးတွေက နူးညံ့လွန်းတယ်။ အေးစက်စက် တီးကွက်တစ်ကွက် အတိုင်း ပေါ်လာတဲ့ သံစဉ်က ပြေပြေချောချော ရင်ထဲကို လှိုင်းခတ်……..
Homesick with Cloudy flute song
ဗျပ်စောင်းနဲ့ ပလွေသံချိုရဲ့ ရှေးဟောင်းဂန္တဝင်ဂီတ
ရာသီတစ်ရာသီ ကုန်ပါပြီ။ ကျနော် အိမ်က ထွက်လာ ခဲ့သည်က သုံးလတော့ ပြည့်ပြီ။ အဖေ၊ အမေ၊ ညီ၊ ညီမနဲ့ ကျနော့်ကိုမှ ခင်တွယ် စောင့်မျှော်နေတတ်တဲ့ အိမ်မွေး ခွေးမလေး ဆန်းမီကို လွမ်းသည်။ ဘယ်တော့ ပြန်တွေ့ ကြပါ့မလဲ။ Read more of this post
Filed under mood, poem Tagged with ကဗျာ, ဂီတ, being, download, flute, sister, useless
Some Mathematics Notes and PDF files
Dear Lovers of Maths,My Friends,
As u know, I love Mathematics. Whatever u think what is life,only the life being with Maths is so peaceful for me. For just now, then, I would like to introduce you toablog written about Mathematics. The blogger of it ,Daniel Murfet wasapostdoc at the Hausdorff center of Mathematics.
He also love his subject,too,I think. You can see about him here. And let’s go to his job,I mean ; to his Blog. Thank you all ! 😉
Filed under maths Tagged with blog, download, maths, pdf
Excellent WordPress Security Tips & Plugins
I tested my blog on Blogger, Livejournal,Joomla,Co.cc,Co.in,Multiply and for now on WordPress.
and the last https://zayya.wordpress.com.
Though I made the blogs,I cannot call myself ,the blogger.I m just the blogging-man or writer.I am notatechnician but just thinking-guy.So, I have no any other knowledge of the blog and blogging-source.So and then when you would ask me to show about the blog and the techniques of it,I would be in silence.
Among Blog-Domains, WordPress is satisfied more than other.Just because of it, I usually writes in this zayya.wordpress.
How do I satisfy this wordpress? and Why?
Some reasons and answers are explained at the following. Read more of this post
Filed under Techno Tagged with blog, download, hacker, hacking, plugins, security, wordpress
ဘယ် OS ကို Log in ဝင်ချင်ပါသလဲ
ကျနော်က ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ နီးစပ်ရာ အလုပ်ကိုသာ လုပ်နေတာ ကွန်ပျူတာအကြောင်း ဘာသိလဲ မေးရင် ဟင့်အင်း ဘာမှမသိဘူးပဲ ဖြေစရာ ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာတက္ကသိုလ် ဘာသင်တန်းမှ တက်ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်တော့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်မှာ စနစ်တကျလည်း မရှိလှပါဘူး။ မသိတာတွေ ဗွက်ပေါက်အောင် များလွန်းပါတယ်။
အဲ့တော့ ဇေယျ ဆိုတဲ့ ကျနော် ကွန်ပျူတာအကြောင်းရေးရင် နည်းနည်းလက်တွန့်နေမိတယ်။ အဲ့လိုတွန့်တဲ့ ကြားက အခု တစ်ပုဒ်တော့ တင်လိုက်တယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးတယ်တော့ ဟုတ်ဘူး ။ Hacking ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ဖတ်နေရင်း တော်တော်လည်း ရှင်းလို့ လွယ်နေတာမို့ ဘာသာပြန်ရေးထားတာပါ။ အရမ်းလွယ်နေတာမို့ ဒါများကွာ ဆိုရင်လည်း မသိသေးတဲ့သူများအတွက် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကွန်ပျူတာအလုပ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အထဲတွေမှာ ပါတ်စ်ဝတ် ထိန်းထားတဲ့ Operating System တစ်ခု ကို ဘယ်လိုဖောက်ထွင်းဝင်မလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်အခါမှာ သုံးတဲ့ OS တွေကတော့ သုံးခုလောက်ပဲ ရှိမယ်။ Windows ၊ Linux ၊ Mac ။ ကျနောတို့ ခင်ဗျားတို့ ကွန်ပျူတာတွေက ဒီ OS တွေထဲက တစ်ခုခု သုံးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ ဒီကွန်ပျူတာကို ဘယ်သူ ဘယ်လို လာဖွင့်မလဲ ။ အဲ့ဒီ သူတပါး ဖွင့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သိနေဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Windows တွေက အသုံးလည်း များတဲ့ အတွက် ဒီ ဝင်းဒိုးရဲ့ Login Password ကို ဖောက်ထွက်ဖို့ ပရိုဂရမ်တော်တော်များများလည်း ရှိတယ်။ Read more of this post
Filed under Techno Tagged with download, hacking, website
On Being With Others is an outstanding and compelling work that uncovers one of the key questions in philosophy: how can we claim to have knowledge of minds other than our own? Simon Glendinning’s fascinating analysis of this problem argues that it has polarized debate to such an extent that we do not know how to meet Wittgenstein’s famous challenge that “to see the behavior ofaliving thing is to see its soul”. This book sets out to discover whether Wittgenstein’s remark can be justified by drawing on both the analytic and continental traditions.
Filed under eBook, wisdom Tagged with being, download, philosophy